သင့်အတွက် မနက်ဖြန်: Windows နှင့် ဆော့ဝဲရ်
Windows နှင့် ဆော့ဝဲရ်
တင်ထားသမျှ Softwareအကြောင်း ....
(၀) Babylon English + မြန်မာအဘိဓါန်
(၁) Windows သမိုင်းအကြောင်း
(၂) File hippoမှ အလွယ်တကူ Free Softwareများယူရန်
(၃) Operating Systems အသုံးပြုခြင်းစစ်တမ်း
(၄) Browers အသုံးပြုခြင်းစစ်တမ်း
(၅) Windows XP vs Windows Vista
(၆) Spybot နဲ့ Spyware များကို အသေထုရအောင်
(၇) WinPatrol နှင့် မသင်္ကာဖွယ်ရာများ ဖယ်ရှားစို့
(၈) Windows XP တွင် Run command ဖြင့် Programs များဖွင့်ကြစို့
(၉) မြန်မာဖောင့်နှင့် MS difficulties
(၁၀) Ccleaner programဖြင့် မိမိကွန်ပျူတာအား သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြရအောင်
(၁၂) Delete one of two operating systems
(၁၃) Net Sendဖြင့် Network computersတွင် Messageပို့ရအောင်
(၁၄) ချစ်စရာမကောင်းသည့် Love Virus
(၁၅) Recorder ဖြင့် အသံဖမ်းခြင်း
(၁၆) Private Cam Virus ၀င်ရောက်ခြင်း
(၁၇) NetMeetingဖြင့် အစည်းအဝေးထိုင်ရအောင်
(၁၈) Setup Home or Small Office Network
(၁၉) MyMyanmar Unicode System - The Second Generation
(၂၀) Missing Language Barကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမှာလဲ?
(၂၁) Local Disk C/Dကို Double-clickဖြင့် ပုံမှန်အတိုင်း ဖွင့်မရပါက
(၂၂) ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ရှိရှိသမျှ ဆော့ဝဲ၊ ဂိမ်းနဲ့ဖိုင်အမျိုးမျိုး ဒီမှာအလကားရမယ်
(၂၃) Desktop Iconကို Transparent ဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်မယ်။
(၂၄) မိမိ၏ Folderအား တခြား Userဖွင့်၍မရအောင် Privateလုပ်ထားမယ်။
thurasoe on March 8, 2009 at 12:06 PM said...
this my blogger. www.thurasoe.blogspot.com